Cabdi Wali Gaas oo Doonaya inuu Markale Hogaamiyo Puntland (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Cabdi Wali Gaas oo Doonaya inuu Markale Hogaamiyo Puntland (Sawirro)
Cabdi Wali Gaas oo Doonaya inuu Markale Hogaamiyo Puntland (Sawirro)
December 18, 2018 December 18, 2018 admin13391 Comment on Cabdi Wali Gaas oo Doonaya inuu Markale Hogaamiyo Puntland (Sawirro)
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku dhawaaqay maanta inuu mar labaad u taagan yahay qabashada xilka Madaxweynaha Puntland, Munaasabad ka dhacday Magaalada Garowe ee Caasimadda maamulka Puntland ka sheegay inuu u tartamayo doorashada 8 Janaayo 2019.
Cabdi Wali Gaas ayaa muddo 5 sano ah hayey jagada Madaxweynaha Puntland. wuxuuna intaa ku daray hadii markale la doorto inuu dhameystiro doono mashaariicdii uu bilaabay, sidoo kale wuxuu sheegay inuu wax ka qaban doono dib u habeynta ciidamada iyo dib usoo celinta deegaanada Maqan.
Salaadiin iyo marti sharaf kale ayaa ka hadlay goobta, waxayna inta badan muujiyeen taageeradooda in Markale la doorto CabdiWali Maxamed Cali Gaas.
Doorashada Madaxtinimada Puntland ayaa sanadkan ka xiiso badan sanadihii hore, waxaana u taagan musharixiin farabadan oo u badan qurbojoog, laba musharax oo kaliya ayaa ka ah daljoog Siciid Deni iyo Asad Cismaan.
Diyaaradaha Maraykanka oo Duqeeyey gobolka Bari
Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjirayaasha cusub ee India iyo Nigeria
February 14, 2019 February 14, 2019 Cali Yare
1 thought on “Cabdi Wali Gaas oo Doonaya inuu Markale Hogaamiyo Puntland (Sawirro)”
Abdi wali Gas Qaran’kii soomaaliya waxaa uu ka ahaa Rw’ waxba uma qaaban Qaran Maamul Gobaled ayuu aaday Maxuu ku soo kordhiya?
yuu waqti idin ka dhumin PLS